Fractional Co2 Laser Factory - Mpanamboatra Laser Laser Fractional China
Kalitao avo lenta Co2 F ...
1060nm 4 Tanana Diode Lase ...
Milamina avo lenta azo fehezina Co2 Fractional Laser manidy ny fivaviana manify hoditra molotra fanavaozana ny hoditra
Loha fitiliana an-tsaina, fandidiana mora foana ary fotoana fitsitsiana. Ny lohan'ny fandidiana dia ampiasaina indrindra amin'ny fanapahana ny hoditra sy ny fantsika natsipy, ny nevus compound ary ny nevus intradermal sns. Ny loha gynecology1, ny 360 ° ary ny 90 °, ny laser vita amin'ny vatan'ny vertebral Gold dia manana taratra avo kokoa sy vokatra ara-pitsaboana tsara kokoa. Loha gynecology2, fitsaboana labia vulva, fanesorana Melanin ny labia. Fiaramanidina fiaramanidina any ivelany dia mampiasa firaka metaly avo lenta, tsimatra vy 24 vita amin'ny vy nandrisika ao anatiny .Mahatoky sy azo antoka kokoa ny rohy ...
Fractional Co2 Laser Vaginal Fanamafisana ny Laser Medical Co2 Laser Acne Scar Fanala
Loha fitiliana an-tsaina, fandidiana mora foana ary fotoana fitsitsiana. Ny lohan'ny fandidiana dia ampiasaina indrindra amin'ny fanapahana ny hoditra sy ny fantsika natsipy, ny nevus compound ary ny nevus intradermal sns. Ny loha gynecology1, ny 360 ° ary ny 90 °, ny laser vita amin'ny vatan'ny vertebral Gold dia manana taratra avo kokoa sy vokatra ara-pitsaboana tsara kokoa. Loha gynecology2, fitsaboana labia vulva, fanesorana Melanin ny labia. Ny fiaramanidina fiaramanidina ivelany dia mampiasa firaka metaly avo lenta, tsimatra soldery volamena 24 ao anatiny, izay azo antoka kokoa ny rohy a ...
Masinina laser miisa CO2 miato miaraka amin'ny Tube Tube
Masinina fanamafisana ny fivaviana miova amin'ny laser
Ny lohan'ny scanning marani-tsaina, ny fanalahidy vaovao, ny fanindry M hanova sary, ny fanindriana lava telo segondra hanomanana, ny '+' afaka mampitombo ny haben'ny sary, ary ny '-' dia ampiasaina hampihenana ny haben'ny sary. Mora amin'ny mpanjifa miasa. Laser emitter: Laser nafarana avy any Etazonia, ny herin'ny tampon'ny herinaratra dia mety hahatratra 100W, androm-piainana: 2000 ora. Ny bracket dimmer vaovao dia azo ahena tsy manala ilay milina. Tanana miisa 7 voarindra, miasa 360freely, mampihena be ny angovo los ...